Warri kafaran, “Qiyaamaan nutti hin dhuftu” jedhan. “Akka isin jettanii miti. Rabbii kiyyaan kakadhe, dhugumatti isinitti ni dhufti. [Rabbiin] Beekaa waan hin mul’anneeti. Wanti hanga madaala atamii, wanti sana irra xiqqaa fi kan sana irra guddaas samii keessaa fi dachii keessatti Isa irraa kan hin miliqne ta’ee kitaaba ifa baasaa ta’e keessa jiraatu malee hin hafu.” Suuratu Saba 34:3